Plansee သည် CIGS ဆဲလ်များ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန် MoNa sputtering ပစ်မှတ်များကိုလွှတ်တင်သည်
နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအရသိရသည်, Plansee High Performance Materials သည် MoNa sputtering ပစ်မှတ်ကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနှင့်တစ်ပြေးညီကောင်းမွန်သော microstructure မြင့်မားသောပစ်မှတ်တစ်ခုနှင့်မကြာသေးမီက Swiss Swiss Material Science and Technology Laboratory နှင့်ပူးတွဲစမ်းသပ်မှုရလဒ်များ (အမ်မာ) MoNa sputtering ပစ်မှတ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်အခြားအလားတူပစ်မှတ်များထက်သာလွန်ကြောင်းပြသသည်။ ဆိုဒီယမ် doped molybdenum အလွှာကိုသုံးပြီးနောက်, CIGS နေရောင်ခြည်ဆဲလ်များ၏ထိရောက်မှုသည်အလွန်တိုးတက်လာသည်ဟုဆိုသည်.
လက်ရှိအချိန်မှာ, စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပြဿနာများစွာရှိသည် ။Watt ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုဒေါ်လာဖြင့်လျှော့ချခြင်းသည် CIGS နေရောင်ခြည်သုံး module ထုတ်လုပ်သူများရင်ဆိုင်နေရသောပြင်းထန်သောစိန်ခေါ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။; အထူးသဖြင့် sputtering ဖြစ်စဉ်တွင်, CIGS ပစ္စည်းစုဆောင်းမှုအတွက်အရေးကြီးသောနည်းပညာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်, ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းတိုးတက်စေရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်. ပြန့်ကျဲသွားသောရုပ်ရှင်များ၏မြင့်မားသောဘေးတိုက်တစ်သားတည်းဖြစ်မှုနှင့်မတူပါ,Sputtering ပစ်မှတ်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည် corrosive ဂုဏ်သတ္တိရှိပြီးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းမရှိပါ, ထို့ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသော plasma သိပ်သည်းဆများကြောင့်ဖြစ်ရသည်, ပစ်မှတ်ဧရိယာအများစု၌ပစ္စည်းအလုံအလောက်ရှိလျှင်ပင်, အချို့သောပစ်မှတ်များကိုအစားထိုးရမည်။ ဤအားနည်းချက်ကိုကျော်လွှားရန်, “စွယ်ရိုး” ကွဲပြားသောအပြင်ဘက်အချင်းများပါရှိသောပစ်မှတ်များ၊ အထူများဖြင့်လှည့်သောပစ်မှတ်များသည်ပစ်မှတ်၏သက်တမ်းနှင့်အစားထိုးသံသရာကိုရှည်စေသည့်အဖြေတစ်ခုဖြစ်သည်။.
ဒါအတွက်, Plansee သည်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်လိုက်သည်။ sputtering system ကို planar structure မှ rotating target သို့ထိရောက်စွာပစ်မှတ်၏အသုံးချနှုန်းကိုထိထိရောက်ရောက်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ 30% သို့ 70%, သန့်ရှင်းသော molybdenum ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမော်လီဒင်နမ်လှည့်ပစ်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ထားသော molybdenum အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြန်လည်ဆက်သွယ်မှုတွင်အပိုအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရှိသည်။: အဲဒါ, ထို့အပြင် molybdenum ပစ္စည်းကို stainless steel tube နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်စျေးကြီးသောဂဟေဆော်ပစ္စည်းများကိုသုံးရန်မလိုအပ်ပါ, sputtering energy အထိမြင့်သည် 30 ဤလုပ်ငန်းစဉ်၌ kW/m ကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အပူဝန်မြင့်မားစေသည်, ဂဟေဆော်ပစ္စည်းသည်ဤအပူဝန်ကိုမခံနိုင်ပါ: အသုံးများသောဂဟေဆော်ပစ္စည်းမှာ indium ဖြစ်သည်, ၎င်းပစ္စည်းကို ၁၅၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အရည်ကျိုသည်, ထို့ကြောင့် molybdenum ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများသည် peeling ၏အန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်လျှော့ချမှုသည်လည်းမြင့်မားသောအစစ်ခံနှုန်းကိုရရှိစေပြီးရုပ်ရှင်၏ထူးခြားချက်များကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။, လျှပ်စစ်စီးကူးမှုတိုးမြှင့်ခြင်းကဲ့သို့, စသည်တို့.
အကြို: PVD အပေါ်ယံပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောနည်းပညာတိုးတက်မှုများ
နောက်တစ်ခု: tungsten-titanium Sputtering ပစ်မှတ်များကိုအလှည့်ကျနည်းလမ်းသစ်